Knowledge – Page 105 – Shwe Sar
“နေမင်း လို အလင်းပေး တဲ့ တန်ခိုး လမ်းကြောင်းကလေး ပါခဲ့ မယ် ဆိုရင်”
By Shwe SarPosted on September 29, 2020 September 29, 2020
သူက လက်သူကြွယ် လက်ချောင်းအောက်မှာဒေါင်လိုက် မျဉ်းတိုကလေး အဖြစ်တည်နေမယ် လက်သူကြွယ် လက်ချောင်းပိုင် နယ်မြေက တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္ဂနွေ ဆိုတာက သူရဇ္ဇလို့ခေါ်တဲ့ နေမင်း ၊နေမင်းဆိုတာက သည်မြေကမ္ဘာ၏ တန်ခိုးရှင် (တန်ခိုး ) ဆိုတာက […]
ဂျိုင်းမွှေးတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပါးပြီး ပြန်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်ပေး မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ…
အကျီ င်္လက်ပြ တ်လေးတွေ၊ ကြိုးတစ်လုံး အင်္ကျီလေးတွေ trend ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျိုင်းမွှေးေ တွနဲ့မို့ မဝတ်ရဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ Waxing တွေလုပ်လုပ်၊ ဘယ်ေ လာက်ပဲ ရိတ်ရိတ် ရက်အနည်းငယ်ကြာတာနဲ့ […]
အုံး လွဲ ရင် ဒီလိုလေးလုပ်
လူတော်တော်များများအုံးလွဲတတ်ကြပါတယ်။ အုံးလွဲလျှင် ဦးခေါင်းကို လှည့်မရတော့ပဲ အလွန်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာ ဆေးသောက်ဆေးထိုး ဒဏ်ကျေဆေးမျိုးစုံလိမ်းပြီးနှိပ်နယ်တတ်ကြပေမဲ့ ဝေဒနာကား မ သက်သာ။ နာကျင်နေတဲ့ကြွက်သားများကိုနှိပ်နယ်ခြင်းကြောင့်နာကျင်တဲ့ဒဏ်ကိုပို၍ပင် ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင်… ဦးခေါင်းရဲ့ ပထဝီကြော ခြေထောက်ကို သတိရလိုက်ပါ။ ခြေဖဝါးစောင်းကိုဦးစွာနှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ခြေခလယ်ကိုနှိပ်ပါ။ […]
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် ကို လုံးဝ မ တင် သင့် တဲ့ အကြောင်း အရာ (၄) ခု…
ဒီနေ့ ခေတ်ကြီး ကတော့ လူမှုကွန်ယက်ခေတ် ဆိုတော့ လူတိုင်း ကိုယ့်ခံစားချက်တွေ အကြောင်းအရာတွေကို ဖြစ်သမျှ အကြောင်းတွေ အကုန် လူမှု ကွန်ယက်ပေါ် တင်နေ တတ်ကြတာ သိပ်တော့ မထူး ဆန်းလှ ပါ ဘူး […]
ကိုဗစ်ရောဂါ လက္ခဏာနှင့် သာမာန်အအေးမိ၊ တုတ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာ ကွာခြားပုံ
ကိုဗစ်နဲ့ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိ လက္ခဏာများ ကွဲပြားပုံ (တခုခုဖြစ်ရင် ခွဲခြားနိုင်အောင် သိထားသင့်ပါတယ်) ကျနော်တို့ဆိုတာလည်း လည်ချောင်းထဲနာသလိုလိုဆို ကိုဗစ်ကြီးကို ပြေးမြင်တော့တာကိုး။ အကိုရေ ကိုဗစ် ဖြစ်နေသလားမသိဘူး စိတ်ပူတယ်ဆိုသူတွေအတွက် ယူကေနိုင်ငံ National Health Service […]
သေသည့် တိုင်အောင် (သွားခိုင်) တဲ့ဆေးနည်း.
အသက်ကြီးလာရင် (သွား)နာတာ သွား(နဲ့ )တာဖြစ်လာ တတ်ပါတယ် ။နောက်တော့(သွား)က ကျိုးတော့တာပါဘဲ ကျိုးပီးရင်ပြန်မပေါက် တော့ပါ (သွား)ကျိုးရင်မိမိစားတဲ့ အစာကျေညှ က်စွာ မ ဝါးနိုင်ခြင်းကြောင့်အဟာရဖြစ်ထွန်းမှု နည်းတော့တာပါ။အသက်ကြီးလာတာနဲ့ မိမိ၏(သွား) မကျိုးရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်ရန်စေတနာရှေ့ထား၍ငွေမကုန်တဲ့ဆေးနည်းလေးကို မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီးရင် မစား သုံး သင့်ကြောင်း လူသိပ် မသိသေး တဲ့ အစားအစာ များ
အခုခေတ် အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ ရေခဲသေတ္တာရှိကြပြီး အစားအစာတွေကိုလည်း တစ်ပတ်စာလောက် သိမ်းစည်းကာစားသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက နေ့တိုင်းဈေးသွားနေရတဲ့ အခက်အခဲကိုလျော့ကျစေပြီး အလုပ်ရှုပ်သက်သာစေပေမယ့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားတာနဲ့ ပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ပါလျော့ကျပြီး အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ အစားအစာတွေလည်း ရှိနေလို့ပါ ။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်မသိမ်းထားသင့်တဲ့ အစားအစာ(၆)မျိုးကတော့… […]
လူအများစားသုံးနေကြတဲ့ ကြက်ဥဟာ စားရင်အရသာရှိတယ် အားရှိတယ် လို့ သိထား​ပြီးကြမှာပါ ကြက်ဥမှာ proteinဓာတ်အပြည့်အဝပါဝင်ပြီးနလံထလူနာတွေသွေးအားနည်းသူတွေအတွက် စားပေးသင့်တယ်လို့ အဟာရဗေဒ ပညာရှင်တယောက် ရေးထားတာဖတ်ဖူးပါတယ် တရုတ်ဆေးကျမ်းထဲမှာလဲ ကြက်ဥသည် အားကိုဖြစ်စေ၏ သန္ဓေကိုရစေ၏ အသားကိုလှစေ၏ ဝမ်းကိုမှန်စေ၏ နှလုံးကိုသန်စေ၏ အဆုတ်ကို […]
သရဏဂုံ တည် လျှင် ရရှိစေ မည့် အကျိုး ထူး များ
သရဏဂုံ တည်သူ ည အိပ်ယာ မဝင်ခင် သရဏဂုံတည်ပြီးမှ အိပ်ကြပါ။ သရဏဂုံတည်သောသူသည် ထိုဘဝမှ စုေ တသောအခါ တစ်ဘဝတာ တည် ခဲ့သော သရဏဂုံ ကုသိုလ်ကြောင့် …… (၉၁)ကမ္ဘာ အပါယ်လေးပါးသို့ မကျရောက်ရခြင်း။အကြိမ်(၈၀) […]
ရဟန်းတွေ ကျ ဆံပင် ရိတ်ခိုင်းပြီး ဘုရား ရှင်ကျ ဘာ လို ဆံပင် ရှည်နေ တာ လဲ
ဘုရားရှင် ဆံတော် ဘာကြောင့် အရှည် ထားရတာလဲ ? ဒီမေးခွန်းကို စတင်မေးခဲ့သူက ဘာသာခြားတစ်ယောက်။ကြက်သေသေပြီး ဆွံအခဲ့သူက ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ။သူကမေးတယ်… “ဘုရားရှင်က ချစ်သားရဟန်းတွေကျတော့ ဦးပြည်းခေါင်းတုံးနဲ့ ။ သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဆံတော်အရှည်နဲ့ကျတော့ သိ […]